Iindaba - Yintoni iGallium Nitride?
I-Gallium Nitride yi-binary III / V ngqo ye-semgonductor eyi-bandgap efanelekileyo ngokufanelekileyo kubaguquli bamandla aphezulu abakwaziyo ukusebenza kumaqondo obushushu aphezulu. Ukusukela ngeminyaka yoo-1990, ibisoloko isetyenziswa kwizibane ezikhupha ukukhanya (i-LED). IGallium nitride ikhupha ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okusetyenziselwa ukufundwa kwe-disc kwi-Blu-ray. Ukongeza, i-gallium nitride isetyenziswa kwizixhobo ze-semiconductor, izixhobo ze-RF, ii-lasers kunye neefotonics. Kwixesha elizayo, siya kubona iGaN kwitekhnoloji yesenzwa.
Ngo-2006, indlela yokuphucula i-GaN transistors, maxa wambi ebizwa ngokuba yi-GaN FETs, yaqala ukwenziwa ngokukhulisa umaleko omncinci we-GaN kumaleko we-AIN wesilayidi esemgangathweni kusetyenziswa isinyithi sokubekwa kwemichiza yomoya (MOCVD). Umaleko we-AIN usebenza njengesiphazamisi phakathi kwe-substrate kunye neGaN.
Le nkqubo intsha yenza ukuba i-gallium nitride transistors ikwazi ukuveliswa kwimizi-mveliso ekhoyo njenge-silicon, isebenzisa phantse iinkqubo ezifanayo zokuvelisa. Ngokusebenzisa inkqubo eyaziwayo, oku kuvumela ukufana, iindleko eziphantsi zokuvelisa kunye nokunciphisa isithintelo ekwamkelweni kweetransistors ezincinci ezinomsebenzi ophuculweyo.
Ukuqhubeka nokuchaza, zonke izinto zeemiconductor zinento ebizwa ngokuba yi-bandgap. Olu luhlu lwamandla kwindawo eqinileyo apho kungabikho i-electron. Ukubeka nje, i-bandgap inxulumene nendlela izinto eziqinileyo ezingawenza ngayo umbane. IGallium nitride ine-3.4 eV bandgap, xa kuthelekiswa ne-silicon's 1.12 eV bandgap. Isithuba esibanzi sebhendi ye-Gallium nitride sithetha ukuba inokugcina amandla aphezulu kunye namaqondo aphezulu obushushu kune-silicon MOSFETs. Le bandgap ibanzi yenza ukuba i-gallium nitride ifakwe kwi-optoelectronic high-power and high-frequency devices.
Isakhono sokusebenza kubushushu obuphezulu kakhulu kunye nemithamo ephezulu kune-gallium arsenide (GaAs) transistors ikwenza i-gallium nitride efanelekileyo yamandla kwisikhulisi se-microwave kunye ne-terahertz (ThZ) izixhobo, ezinjengokucinga kunye nokuziva, intengiso yexesha elizayo ekhankanywe apha ngasentla. Itekhnoloji ye-GaN ilapha kwaye ithembisa ukwenza yonke into ibengcono.